Ihe kacha mma 24 aka Echiche Idebe Maka Ụmụ nwoke na Ụmụ nwanyị - Atụmatụ Echiche Tattoos
Mgbe ị nwere ụdị ahụ a na-emepụta n'echiche gị, ekwela ka ụgwọ ya kwụsị gị ịbanye. Ọnụahịa nke egbu aka dị ka nke a nwere ike ịkụda ọtụtụ ndị mmadụ ịgaghị ya ma ọ bụrụ na ọ na-abịa site na ọkachamara. Ụzọ kachasị mma maka ịchọta ezigbo aka tattoo bụ mgbe ị na-ewepụ oge iji chọpụta ihe ị chọrọ.
2. Ọkpụkpụ isi na akpị aka
Ịzụ ahịa anaghịzi etinye uche n'ihe onwunwe. Ị nwere ike ịzụta ụdị ụdị ọkpụkpụ ịchọrọ ịchọrọ inwe. Ahịa aka egbu egbughị amalite taa.
3. Ịdọ Aka Aka
N'ụbọchị ndị a, anyị na-ahụ ọtụtụ narị ndị na-ese ihe na-etinye aka na egbu aka n'ụzọ dị otú a nke na ị gaghị enwe ike ịjụ ma ha esi emepụta ụdị nkà a.
4. Aka Aka zuru oke
Ụfọdụ ndị ọkachamara kachasị ahụmahụ pụrụ ịdị oke ọnụ iji akwụ ụgwọ ma e jiri ya tụnyere onye na-ese ihe na-enweghị obere. E nwere ndị na-ese ihe ngosi na-akwụ ụgwọ kwa oge ma nke a nwere ike ịdị oké ọnụ nye gị ma ọ bụrụ na ị dị njikere maka mmefu ego ahụ.
5. Okpokoro Isi & Ifuru Aka
Ị ga-aghọta na n'agbanyeghị nnukwu ọnụahịa, ọ bụrụ na onye ọrụ ọkachamara na-agụnye ya, ịchọta egbu egbu dị mma bụ njedebe ikpeazụ.
6. Aka Aka Aka
Ọ bụrụ na ị na-eche echiche ịnweta ụdị egbu egbu dị egwu, ọ pụtara na ị ga-eji onye ọkachamara ọkachamara na-enyere gị aka. Enweghị nkọwa ọ bụla ịma mma aka gị nwere ike ile anya mgbe ị nwere ezigbo egwu na ebe zuru oke maka ntinye gị.
7. Mma Aka Aka
Ọnụ ego ịnweta aka na-adabere na mmefu ego gị. Otu n'ime ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ tupu ha ana-egbu egbu dị ka nke a bụ ịmara ọnụọgụ aka. Ọ dị mfe ịnwụ aka ma ọ bụrụ na ị ghọtara ihe dị mkpa banyere ya.
8. Okooko osisi Aka
E nwere ọtụtụ narị aka akara #designs online. Ị nwere ike ịga na ịmepụta aka aka gị iji mee ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche.
9. Ụjọ Aka Egwu
Ị ga-enwe nkwurịta okwu ihu na ihu gị na ndị na-ese ihe n'ihu gị ịnakwere ihe ịgwa gị. Imeri onye ogwu gi tupu gi agaa egbu egbu di ezigbo mkpa. Usoro a ga - enyere gị aka izere nsogbu ma meekwa nhọrọ ziri ezi.
10. Cat aka aka
11. Ntu aka aka
12. Ụdị Aka Tiger
13. Atụmatụ Echere Aka Aka Aka
Ọtụtụ ndị na-adịghị njikere ịnwụ site na njide ha, jiri ụdị ụdị a eme ihe. I nwere ike gbaa akaebe na egbu aka enweghị onye na-atụ egwu ya. Ị nwere ike ịmepụta ihe niile e kere eke na ya ma gosipụta ọkwá dị elu na ya. isi iyi
14. Aka aka zuru oke
Ị nwere ike ịchọrọ ịnwe ụdị egbu egbu na-adighi mma ugbu a na enwere ọganihu ngwa ngwa n'inweta igbu egbugbu. Ebee ka i chere na ị ga-enwe ụdị egbukebeke n'ahụ gị? isi iyi
15. Mma aka aka
Enwere ọtụtụ ebe ị nwere ike ịbanye ma akara aka igbu egbu bụ naanị otu ebe ọtụtụ n'ime anyị nwere ike ịchọrọ. isi iyi
16. Aka mma aka aka
Enweghị ihe ị ga-eme na ị gaghị enweta aka. isi iyi
Atụmatụ aghụghọ aka
17. Mara mma aka akara
Enweghi njedebe ihe ị nwere ike ime na igbu egbugbu a. Ị nwere ike ịhapụ ya nnukwu ma ọ bụ obere dabere na ụdị egbugbu ị na-achọ. isi iyi
18. Aka aka dị mfe
Mgbe ị na-enwe inwe nchacha aka aka, ị ka nwere ike ime ya. isi iyi
19. Ebe aka aka
Agbugbu e mere iji lee anya n'ụzọ dị otú a na-eme ka ọ dịkwuoro gị mfe ịgbakwunye ụdịdị na ọbụna atụmatụ ya. Enweghi njedebe ihe ị nwere ike ime na igbu egbugbu gị. isi iyi
20. Mkpịsị aka mkpịsị aka
Ụmụ nwanyị ahụ nwere ike ịga ogologo oge n'ịhụ na ha na-ele anya dị iche iche na nwanyị na atụmatụ ha ga-achọ n'aka ha. isi iyi
21. Aka akara aka
Ihe niile ị chọrọ ime bụ ịchọta onye ọkachamara ọkachamara ga-eso nrọ gị mgbe ọ na-adọta ihe ahụ zuru oke na gị. isi iyi
22. Ifuru aka aka
N'ikpeazụ, gịnị ka ị na-eche banyere ụdị igbu egbu aka dị ka nke a? Ụzọ o si ele anya na-eme ka ọ dị mfe ma dị mma. Ụmụ nwanyị enweghị ike ịkwụsị ịhụ imagbu egbu egbu a maka ụzọ o si ele anya. Ị nwere ike ịsị na egbu egbu ahụ na-enye aka mgbe ị na-agbalị iche dị iche na ndị ọzọ na-egbu egbu isi iyi
23. Mara mma Ifuru aka aka
24. Ọnwụ egbu egbu
Pịa ebe a maka ihe ntinye aka
agbụrụ ebona-egbu egbuzodiac akara akarandị na-egbuke egbukeọnwa tattoosỤdị ekpomkpaUche obiegbugbu egbugbuegbu egbu maka ụmụ nwokeenyí egbu egbuegbu egbu okpuụmụnne mgbun'olu oluegbugbu maka ụmụ agbọghọokpueze okpuezena-adọ aka mmaegbu egbu hennaegwu egwundị mmụọ ozienyi kacha mma enyiụkwụ akaaka mma akaGeometric Tattoosaka akaegbu egbuakpị akpịegbu egbu diamondrip tattoosAnkle Tattoosọdụm ọdụmechiche egbugbuima ima mmaaka akaakwara obiudara okooko osisiegbu egbu egbuarịlịka arịlịkaegbu egbu ebighi ebimma tattoosNtuba ntugharimehndi imewekoi ika tattoonnụnụegbu egbu mmiriEgwu ugodi na nwunyeazụ azụegbu egbu osisi lotusakara ntụpọngwusi pusi